नेपाल आज | माधब नेपालका नजरमा ओली डन र शहिदका श्रीमती ताक्नेहरुका नेता !
माधब नेपालका नजरमा ओली डन र शहिदका श्रीमती ताक्नेहरुका नेता !
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधब नेपाल एक बिहान खुमलटारमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीको कार्यशैलीबारे विमर्श गरिरहेका थिए । नेपाल ओलीलाई आँत कमजोर तर ओठ सुरो भएको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिरहेका थिए ।
प्रचण्ड भने ओलीसँग झस्केजस्तो सुनिन्थे । मुर्खसँग दैब डराएजस्तो डराउनु परेको प्रचण्डको विश्लेषण थियो । ओली हुति नभएको तर परिस्थितीवस मात्र आँटिलोजस्तो देखिन पुगेको नेपालले दोहोर्याए । जति नै गरेपनि ओलीसँग वार–पारको लडाइमा जान तयार देखिएनन प्रचण्ड । प्रचण्डले ओलीसँग बिचार नपुर्याउँदा अनेक उल्झन आउन सक्नेमा टसमस भएनन ।
यही मेसोमा नाकको डाँडी मुन्तिर झरेको चश्माबाट बाहिर हेर्दै नेपालले प्रचण्डलाई प्रश्न गरिदिए, ‘तपाइँले वास्तवमै युद्ध लडेको हो ?’ ओलीसँग डराउने काँतर अर्थ लाग्ने गरि नेपालले प्रश्न गरेपछि प्रचण्ड आफनै शैलीमा मस्किए । र, प्रश्न गरे ‘के गर्ने हो ल भन्नोस?’ । नेपालले एकै शब्दमा निष्कर्ष सुनाए– वारपार ! प्रचण्डसँग मिलेर ओलीसँग वारपारको लडाइमा रहेका नेपालले यसबिचमा धेरै पापड वेलेका छन । प्रचण्ड अस्थिर भएकाले उनको भर पर्न नसकिने आफनैहरुको सुझावसमेत उनले सुनेनन ।
‘अस्थिर होस की जे होस प्रचण्डमा राजनीतिक गुण छ, ओलीमा अबगुणबाहेक केही छैन’ उनको उत्तर यस्तै हुने गरेको छ । उनले ओलीलाई खराबहरुको नेता भन्ने गरेका छन । माओबादीसँग एकता हुनुपूर्व नै ओलीलाई सार्वजनिकरूपमा नेपालले शहिदका श्रीमती ताक्ने, चरित्रहिन र गुण्डाहरुको नेताको संज्ञा दिएका थिए ।
नेपाल मदिरादेखि टाढा छन, कार्यकर्तालाई भेटघाटमा नैतिक पाठ सिकाउछँन । उता ओली रसिक छन, कार्यकर्तालाई केही परे म छु भनेर ढाडस दिने गर्छन । नेपाल ओलीको सो स्वभाबको कटु आलोचक छन । ‘कार्यकर्तालाई जे गर्न नि छुट दिएको, बाउछोरीका नाममा अनधिकृत उठबश गरेको छ, सहिदका श्रीमतीलाई परिबन्धमा पार्नेहरुलाई संरक्षण गरेर पार्टीलाई रसातलमा पूर्याएको छ ।’
नेपाल ओली विरूद्ध खरो सुनिने गरेका छन । निसन्तान ओलीलाई उनी पक्षधर केहीले ‘बा’ भन्ने गरेका छन । बाको नाता जोडेर जायज नाजायज फाइदा लिने गरेको भनि तेस्रो तहका केही नेताका बारे पुरानो एमालेभित्र पहिलै चर्चा हुने गरेको थियो । नेता नेपाल यसमा कार्यकर्तालाई दोष दिन नहुने बताउछन । उनको भनाइ छ, ‘जस्तो गुरु उस्तै चेला । ओलीले जे खोज्यो कार्यकर्ताले त्यही गरिदिएको मात्र हो ।’
नेपालले पछिल्लो समय ओलीको गैरकम्युनिस्ट चरित्रबारे महत्वका साथ बहश छेडेका छन । त्यस्को झलक प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेत आएको नेकपाका एक स्थाई समिति सदस्यको दाबी छ । नेपालले निकटजनसँग भन्ने गरेका छन, ‘कार्यकर्ताको चरित्र मुख्य कुरा हो । संस्कारयुक्त पार्टी हो हाम्रो । कस्तो पार्टीलाई ओलीले कस्तो बनाए । ओलीसँगको लडाइ संस्कारका लागि हो ।’ स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई माधब नेपालले पटक पटक भनेका छन, ‘ओलीले पार्टी फुटाउने आँट गर्ने छैनन, गरीहाले संस्कारयुक्त नेताकार्यकर्ता कोही पछि लाग्ने छैन । लेखेर राखनोस।’ नेपालले ओली चरित्रबारे बहिखाता नै पल्टाएपछि प्रचण्ड साबिकको एमालेको क्रिम फोर्स नेता नेपालसंगै रहेकोमा बिश्वस्त बनेको बताइन्छ । परिआए ओलीलाई कार्बाही गर्नेसम्मको रणनीतिमा प्रचण्डलाई सुर्याउन नेता नेपाल सफल भएको ति स्थाई समिति सदस्यको टिप्पणी छ ।